မိုက်ကယ် အိုဝင်နောက်ပိုင်း သုံးရာသီဆက်တိုက် ဂိုး ၂၀ နဲ့အထက် ပထမဆုံးသွင်းနိုင်သူဖြစ်လာခဲ့တဲ့ ဆာလား – Sports A2Z
ဘုန်းမောက်ကို အနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲမှာ လီဗာပူးလ်အသင်းအတွက် အရေးပါတဲ့ ချေပဂိုးကို သွင်းယူပေးခဲ့တဲ့ အီဂျစ်လက်ရွေးစင်တိုက်စစ်မှူး မိုဟာမက် ဆာလားဟာ အသင်းသမိုင်းမှာ မိုက်ကယ် အိုဝင်ရဲ့ ၂၀၀၀-၀၁ နဲ့ ၂၀၀၂-၀၃ ကြားက စံချိန်နောက်ပိုင်း ၃ ရာသီဆက်တိုက် အနည်းဆုံး ဂိုး ၂၀ နဲ့အထက် သွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးကစားသမား ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၇-၁၈ ရာသီရဲ့ နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့ကာလမှာ စီးရီးအေကလပ် ရိုးမားအသင်းကနေ လီဗာပူးလ်အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း အသင်းရဲ့ အဓိကတိုက်စစ်မှူးတစ်ဦးဖြစ်လာသလို လစာအများဆုံးကစားသမားစာရင်းဝင်လည်းဖြစ်လာခဲ့တဲ့ ဆာလားဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာတော့ ဂိုးမုဆိုးတစ်ဦးအဖြစ် သက်သေပြီးပြီးခဲ့သူလည်းဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။
ဒီအီဂျစ်တိုက်စစ်မှူးအနေနဲ့ အန်ဖီးလ်ကွင်းကို ပထမဆုံး ခြေချခဲ့တဲ့ ရာသီမှာ ၅၂ ပွဲ ကစားပြီး ၄၄ ဂိုး၊ လီဗာပူးအသင်းနဲ့အတူ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားရခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈-၁၉ ရာသီမှာ ၂၇ ဂိုးနဲ့ ဒီရာသီမှာလည်း ပြိုင်ပွဲအရပ်ရပ်သွင်းဂိုး ၂၀ ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
? Mo Salah is the first Liverpool player to score 20+ goals in three consecutive seasons (all comps) since Michael Owen
Follow our coverage live here ? #LFC #AFC #LivBou
— Sporting Life Football (@SportingLifeFC) March 7, 2020
ဒီလို ၃ ရာသီဆက် သွင်းဂိုး ၂၀ အထိ သွင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့ ကစားသမားက အသင်းဂန္ထဝင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မိုက်ကယ် အိုဝင်နောက်ပိုင်းမှာ ဆာလားမတိုင်ခင်အထိ လူးဝစ် ဆွာရက်ဇ်နဲ့ ဖာနန်ဒို တောရက်စ်တို့လို တိုက်စစ်မှူးကောင်းတွေ ရှိခဲ့သေးပေမယ့် ၃ ရာသီဆက်တိုက် ခြေမှန်မှန်နဲ့ ဂိုး ၂၀ ပြည့်ဖို့တော့ လိုအပ်ချက် အနည်းငယ် ရှိနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
လီဗာပူးလ်အသင်းသမိုင်းမှာ ဂန္ထ၀င်တိုက်စစ်မှူး အီယန် ရပ်ရ်ှကတော့ ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေက တစ်ရာသီအတွင်း အနည်းဆုံးသွင်းဂိုး ၂၅ ဂိုးနဲ့အထက်ကို ၆ ရာသီဆက်တိုက် သွင်းယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး မိုက်ကယ် အိုဝင်ရဲ့ စံချိန်ကို လိုက်မီသွားခဲ့တဲ့ ဆာလားကတော့ အသင်းနဲ့အတူ နောက်ထပ် စံချိန်တွေကို ရယူသွားနိုင်ဦးမလားဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရဦးမှာဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။
REF: SPORTING LIFE
UNICODE: ဘုနျးမောကျကို အနိုငျရခဲ့တဲ့ပှဲမှာ လီဗာပူးလျအသငျးအတှကျ အရေးပါတဲ့ ခပြေဂိုးကို သှငျးယူပေးခဲ့တဲ့ အီဂဈြလကျရှေးစငျတိုကျစဈမှူး မိုဟာမကျ ဆာလားဟာ အသငျးသမိုငျးမှာ မိုကျကယျ အိုဝငျရဲ့ ၂၀၀၀-၀၁ နဲ့ ၂၀၀၂-၀၃ ကွားက စံခြိနျနောကျပိုငျး ၃ ရာသီဆကျတိုကျ အနညျးဆုံး ဂိုး ၂၀ နဲ့အထကျ သှငျးနိုငျခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးကစားသမား ဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။
၂၀၁၇-၁၈ ရာသီရဲ့ နှရောသီအပွောငျးအရှကေ့ာလမှာ စီးရီးအကေလပျ ရိုးမားအသငျးကနေ လီဗာပူးလျအသငျးကို ပွောငျးရှလေ့ာခဲ့ပွီးတဲ့နောကျပိုငျး အသငျးရဲ့ အဓိကတိုကျစဈမှူးတဈဦးဖွဈလာသလို လစာအမြားဆုံးကစားသမားစာရငျးဝငျလညျးဖွဈလာခဲ့တဲ့ ဆာလားဟာ ပရီးမီးယားလိဂျမှာတော့ ဂိုးမုဆိုးတဈဦးအဖွဈ သကျသပွေီးပွီးခဲ့သူလညျးဖွဈနခေဲ့ပါပွီ။
ဒီအီဂဈြတိုကျစဈမှူးအနနေဲ့ အနျဖီးလျကှငျးကို ပထမဆုံး ခွခေခြဲ့တဲ့ ရာသီမှာ ၅၂ ပှဲ ကစားပွီး ၄၄ ဂိုး၊ လီဗာပူးအသငျးနဲ့အတူ ခနျြပီယံလိဂျဖလားရခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈-၁၉ ရာသီမှာ ၂၇ ဂိုးနဲ့ ဒီရာသီမှာလညျး ပွိုငျပှဲအရပျရပျသှငျးဂိုး ၂၀ ပွညျ့မွောကျခဲ့ပွီလညျး ဖွဈပါတယျ။
ဒီလို ၃ ရာသီဆကျ သှငျးဂိုး ၂၀ အထိ သှငျးယူနိုငျခဲ့တဲ့ ကစားသမားက အသငျးဂန်ထဝငျတဈဦးဖွဈတဲ့ မိုကျကယျ အိုဝငျနောကျပိုငျးမှာ ဆာလားမတိုငျခငျအထိ လူးဝဈ ဆှာရကျဇျနဲ့ ဖာနနျဒို တောရကျဈတို့လို တိုကျစဈမှူးကောငျးတှေ ရှိခဲ့သေးပမေယျ့ ၃ ရာသီဆကျတိုကျ ခွမှေနျမှနျနဲ့ ဂိုး ၂၀ ပွညျ့ဖို့တော့ လိုအပျခကျြ အနညျးငယျ ရှိနခေဲ့တာလညျးဖွဈပါတယျ။
လီဗာပူးလျအသငျးသမိုငျးမှာ ဂန်ထဝငျတိုကျစဈမှူး အီယနျ ရပျရျှကတော့ ၁၉၈၀ ပွညျ့လှနျနှဈတှကေ တဈရာသီအတှငျး အနညျးဆုံးသှငျးဂိုး ၂၅ ဂိုးနဲ့အထကျကို ၆ ရာသီဆကျတိုကျ သှငျးယူနိုငျခဲ့တာဖွဈပွီး မိုကျကယျ အိုဝငျရဲ့ စံခြိနျကို လိုကျမီသှားခဲ့တဲ့ ဆာလားကတော့ အသငျးနဲ့အတူ နောကျထပျ စံခြိနျတှကေို ရယူသှားနိုငျဦးမလားဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့ရဦးမှာဖွဈကွောငျး ဖျောပွလိုကျရပါတယျ။